Nhau - Maitiro Ekusarudza Akanaka Bhora Kutakura Dhirowa Slide
Munguva pfupi yapfuura, dzimwe shamwari dzekushongedza pamba, dzakandikumbira kutenga zvigadzirwa zvemidziyo kuti utarise kune izvo zvinhu. Iye zvino ndinogovana ruzivo rwangu newe:
sarudzo ye bhora rinotakura slide rinogona kunge riri kuburikidza nemiedzo inotevera kusarudza iri nani mhando simbi telescopic chiteshi:
1. Kutenga bhora bhegi dhirowa inotsvedza kutanga zvinoenderana nekuonekwa kwebhora rinotakura dhirowa masiraidhi, kuti uone kana pamusoro pezvigadzirwa zvakarapwa zvakanaka kana kwete, hapana zviratidzo zvengura.
2. Tarisa kutsetseka uye chimiro che bhora rinotakura mudhirowa, bata njanji yakatarwa yebhora rinotakura rairo, uye wozokanda madhigirii makumi mashanu nemashanu kuti uone kana ichigona kungotsvedza kusvika kumagumo (mamwe mapfupi-mashoma ekutsvedza anotakura mudhirowa mamhanyi haakwanise kungotsvedza nekuda kwekusakwana huremu, iri chiitiko chinowanzoitika). Kana ichikwanisa kutsvedza kusvika kumagumo, iko kutsetseka kwebhora garo rinotakura mamhanyi kuchiri kugoneka. Wobva wadhonza iwo mutserendende kusvika kumagumo, ruoko rumwe rwakabata njanji yakamisikidzwa, rumwe ruoko rwakabata njanji inotakurika, ichizungunuka ichikwira nekudzika, kuitira kuyedza chimiro nehunhu hwechitima chemasiraidhi, zvirinani kusarudza zvishoma ichizungunusa slide njanji.
3. Tarisa ukobvu hwechinhu chinoshandiswa pateresikopu dhirowa chiteshi, uye izvo zvinoshandiswa neWALITON ndeye 1.2 / 1.2 / 1.5 mm munguva uye 1.0 / 1.0 / 1.2 mm. Izvo zvinhu zvinoshandiswa padhirowa chiteshi zvinonyanya kutonhora-yakakungurutswa simbi simbi, pamwe nesimbi isina simbi. Kana tichisarudza nekutenga, isu tinofanirwa kusarudza kwatinoshandisa nzira dze telescopic. Kune nzvimbo nyoro semabati makabati, tinofanirwa kushandisa masiraidhi esimbi. Kune akajairika dhirowa, isu tinofanirwa kushandisa inotonhora-yakakungurutswa masiraidhi esimbi.
4.Quality Certification yemasiraidhi nzira (senge mangani ane chiremera emhando yekuyedza zvitupa anogona kupfuurwa neSGS) uye chengetedzo vimbiso yakavimbiswa nevagadziri.
GERISS HARDWARE inyanzvi bhora rinotakura masiraidhi mugadziri muChina kubvira 1999. Kwemakore makumi maviri kugadzirwa & yekutengesa ruzivo. Kana uine chero mibvunzo, ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.
Runhare: 0086 21 66368006
Wepasi rese Wekutengesa Manager: James Peng
Runhare: +8613764528018 (Wechat / WhatsApp)